Tag: ndenye wordpress | Martech Zone
Tag: ndenye wordpress
Anyị anọwo na-edozi saịtị ole na ole Woocommerce maka ndị ahịa… ọ dịkwabeghị mfe. Woocommerce interface dị ntakịrị ma atụmatụ ndị ọzọ dịkarị site na plethora nke plugins chọrọ ndenye aha akwụ ụgwọ… na nhazi. Ọtụtụ na nhazi ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị Shopify, anyị kesara vidiyo na-egosi gị otu ị ga - esi melite saịtị ecommerce gị niile n'okpuru nkeji 25! Shopify arụ ọrụ n'ezie
Yabụ ị nwetala nnọkọ mmekọrịta gị na mmekọrịta gị na nke a. Na-agbakwunye Fans na ndị na-eso ụzọ kwa ụbọchị ma na-enweta ọtụtụ ndị ọbịa na saịtị gị. Mgbasa mgbasa ozi na-enye gị uto, mana ị naghị ahụ nloghachi na itinye ego na ndị niile na-elekọta mmadụ na-ekwu okwu. Mgbasa mgbasa ozi yiri ka ọ bụ nnukwu ụgbụ a, mana ị naghị ejide ihe ọ bụla n'ihi na onye ọ bụla na-amị na oghere. E nwere ihe omume abụọ dị oke egwu